Ny Air Niugini dia nianjera tamin'ny B737 tao amin'ny lagoon
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Ny Air Niugini dia nianjera tamin'ny B737 tao amin'ny lagoon
Tany amin'ny fanjakan'ny firenena mikrônia dia nisy fianjerana Air Niugini B737 nianjera tany amin'ny farihy iray rehefa nanandrana hidina tao amin'ny seranam-piaramanidina Chuuk Island.
Ireo mpandeha sy ekipa 47 rehetra dia tafavoaka velona tamin'ilay fianjerana ny zoma maraina
Tsy mazava ny filaharan'ny zava-mitranga. Nilaza ny zotram-piaramanidina fa niantsona kelin'ny fiaramanidina ilay fiaramanidina. Na izany aza, nilaza i Jaynes fa ny hany tranga azony eritreretina dia ny nandona ny faran'ny làlambe ary nitohy tao anaty rano.
Nilaza ny tafika an-dranomasina amerikana fa ny tantsambo miasa eo akaiky eo amin'ny fanatsarana ny wharf dia nanampy tamin'ny famonjena ihany koa tamin'ny alàlan'ny sambo inflatable mba hitaterana olona hidina an-tanety alohan'ny nilentanan'ny rano tao anaty rano sahabo ho 30 metatra (100 metatra).
Air Niugini Limited dia kaompaniam-pirenen'i Papua New Guinea, miorina ao amin'ny Air Niugini House izay fananan'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Jacksons, Port Moresby. Izy io dia miasa tambajotra anatiny avy any Port Moresby sy Lae, ary koa ny serivisy iraisam-pirenena any Azia, Oseania, ary Aostralia.
Ny fanjakan'ny Chuuk (fantatra koa amin'ny hoe Truk) dia iray amin'ireo fanjakana efatra ao amin'ny Federated States of Micronesia any amin'ny Pacific Ocean. Chuuk no fanjakana be mponina indrindra amin'ny FSM misy mponina 50,000 120 amin'ny 46 kilometatra toradroa (XNUMX kilaometatra toradroa). Chuuk Lagoon no misy ny ankamaroan'ny olona. Ny ivon'ny mponina ao amin'ny fanjakan'ny Chuuk dia ny Chuuk Lagoon, vondronosy lehibe iray misy nosy be tendrombohitra voahodidin'ny nosy kely amina haran-dranomasina sakana.
Ny federasiona mikronesia dia firenena miparitaka manerana ny Oseana Pasifika andrefana izay misy nosy 600 mahery. Micronesia dia misy firenena nosy 4: Pohnpei, Kosrae, Chuuk ary Yap. Fantatra amin'ny morontsiraka feno alokaloka, rendrika feno vaky ary rava taloha ny firenena, ao anatin'izany i Nan Madol, ireo tempolin'ny basalt maty ary ireo fitoeram-pandevenana izay mipaka amin'ny lagoon ao Pohnpei.
izy FSM dia tao anatin'ny faritry ny Trust Territory of the Pacific Islands (TTPI), a Unfirenena ited Teritoriam-pitokisana eo ambany fitantanan'i Etazonia, saingy niforona ny lalàm-panorenany manokana tamin'ny 10 May 1979, lasa fanjakana ambony taorian'ny nahazoana ny fahaleovan-tena tamin'ny 3 Novambra 1986 teo ambanin'ny Compact of Free Association niaraka tamin'ny United State.
Etazonia no toeram-pizahana iraisam-pirenena be mpividy indrindra mandritra ny fetin'ny fetim-pirenena sinoa
Sulawesi: horohoron-tany lehibe ary tsunami nahafaty olona